Cationic Jersey-cationic fabric-Shaoxing Irbad Dharka Dharka Co., Ltd.
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga>Product>Spring / Dayrta>dhar cationic ah
Dharka kaabashka ayaa leh hal nooc oo dun ah oo si gaar ah loogu daaweeyo geedi socodka xajmiga. Sida dunta caaga ee loo yaqaan 'polyester dunn' ama dunta nayloon kaashka ah.
Dheecaanka Cationic wuxuu iska caabiyaa heerkulka sare, sidaa darteed hannaanka midabaynta dunta, dunta kale ayaa midab yeelan doonta, laakiin dunta cajaladdu ma yeelan doonto, xaaladdan dunta midabkeedu dheehan yahay waxay muujin doontaa saameyn laba-midab leh, saameynta duntana waxaa laga samayn karaa nooc kasta oo dhar ah.
Fiilooyinka dunta ka samaysan waxay ka sameysan yihiin polyester DTY100D + cation DTY100D, feylka weft-ka waxaa lagu xiraa polyester DTY100D. Fiiladda dunta ayaa kooxo loogu diyaariyey labada fiilooyin (qoto dheer dheehku way ka duwan tahay kala duwanaanta alaabta ceeriin oo kala duwan, waana sahlan tahay in la sameeyo xariiq toosan ka dib dheeh). Dufanka iyo weft-ka ayaa lagu dhajiyay qaab dhismeedka 1/1 ee dusha sare ee biyaha. Dharka waa la dabacsan yahay, la sifeeyey, la dheehday (kala firdhi dheehyada, dheehda midabaynta), oo dhammaystira. Dharka ayaa leh astaamaha dareenka jilicsan, way adag tahay in la libdho, iska caabbinta laalaabka iyo iska caabbinta.
Astaamaha dharka khafiifka ah
1, dharka loo yaqaan 'cationic fabric' waa mid ka mid ah astaamaha saameynta midabka midabka leh, isticmaalka astaantan, waxay noqon kartaa xoogaa dhar midab laba-midab leh lagu beddelo, taas oo markaa hoos u dhigeysa qiimaha dharka, tani waa astaamaha dharka kaashka ah, laakiin sidoo kale xaddiday astaamaheeda, wajiga dharka midabbada midabbada badan leh, dharka kaashka ah waa la beddeli karaa oo keliya.
2, dhar cationic midab dhalaalaya, oo aad ugu habboon fiber-ka macmalka ah
3. Iska caabbinta dharka ee marada xittaa waa mid aad u wanaagsan. Ka dib markii lagu daro polyester, spandex iyo fiilooyinka kale ee macmalka ah, xooggu wuu sarreeyaa oo dabacsanaantu way ka sii fiicantahay, iyo iska caabbinta dharka ayaa ku xigta oo kaliya naylon.
4. Dharka kaabashka ayaa leh waxyaabo kiimiko ah, sida caabbinta daxalka, milmay iska caabinta alkali, iska caabinta biliijka, oksaydhyada, hydrocarbons, ketones, badeecooyinka batroolka iyo asiidhyada aan dabiici ahayn, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin xoogaa jidh ahaaneed, sida awoodda iska caabinta iftiinka ultraviolet
Dharka kaashka ah ayaa ah dhar buuxa oo caag ah, inta badan waxaad u isticmaashaa xariir xashiishad jihada warka, la saafiya polyester caadi ah, oo lagu kala dheelo siday u kala horreeyaan midabbo, polyester leh midabyo caadi ah, xariir xashiish ah oo leh dheehyo kaashka ah, saameynta dharka ayaa yeelan doonta saameyn labo midab leh.
1, dhar cationic ah oo leh biyo nadiif ah oo aad u wanaagsan, iyo farqiga u dhexeeya VAT dheecaanka ayaa yar, sidaa darteed si gaar ah ugu habboon loo isticmaalo noocyada isboortiga ee dharka, inta badan waxaa laga sameeyaa funaanado, gaagaab, yoga, iwm, haddii dharka kaashku yahay mid qaro weyn, leh saamaynteeda caday waxay u isticmaali kartaa inay sameyso dhar diiran, surwaal diiran, iyo wixii la mid ah.
2, marada polyester Khan cationic sidoo kale waa mid aad ugu awood badan ilaalinta deegaanka, waxaa loo isticmaali karaa sida dharka polyester saaxiibtinimo deegaanka.
3, maxaa yeelay dharka kasida ayaa dareemaya jilicsan, xirashada sidoo kale waa mid aad u fiican. Waxay sidoo kale leedahay midab dhalaalaya, saameyntu waxay la mid tahay dharka dabiiciga ah. Waxay leedahay dabacsanaan wanaagsan iyo sifooyin nadaafadeed, waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo nigis heer sare ah, dharka dabbaasha iyo dharka dharka isboortiga.
Husky Fleece / jilicsan oo leh spandex iyo rayon